トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Tsara ny mahafantatra ny fomba scry olona * vady? (Tarot, ny fanandroana, famakiana palmie, telepathy, toy ny fanahy mihevitra)
Ohatra, ny olona izay tia no miaraka izao te-hahalala na tsia ny fanahy vadiny ny lahatra ho maro. Ny olona izay tiako ankehitriny dia mieritreritra koa isika maniry ny te-ho fanahy vady.
tsy tonga ny valiny na dia miresaka amin'ny olon-kafa momba ny fanahy vadinao, raha ny sikidy mba hahitana anjara, fanahy vady ary rehefa hitsena, azonao Hiarahana raha tsy ny olona no atao. Raha toa ka mbola tsy nihaona fanahy vadinao, dia afaka ihany koa ny manararaotra ny harena-fil?zany mba hiomanana amin 'ny fihaonana manomboka izao. By
sikidy mba hahazoana ny vaovao ny fanahy vady, dia ho mora kokoa ny mahita ny mpiara-miasa. Ankoatra izany, ao amin'ny raharaha ankehitriny ny tia dia tsy fanahy vady dia, na ny handrava, dia afaka ihany koa ny mamaritra sy raha ny zava-misy ankehitriny no tianao holazaina amin'ny harena-fil?zany. Ny olona miaraka
fotoana izao sy ny olona izay manahy mba hahafantarany na na tsia ny fanahy vadinao, dia aoka ny amin'ny fomba rehetra mampiasa ny harena-fil?zany. Ao amin'ny
anjara fanampiana mba hitady sy ny endri-javatra isan-karazany soulmate ny sikidy
, mihevitra aho fa Inona no atao hoe harena fangatahan'ny-fil?zany mba hitady vady fanahy.
efa be fantatra ho toy ny karatra vintana-fil?zany dia ny karatra tarot. Tarot karatra mampiasa ny karatra voatsoaka dia hafa noho ny sary, no Andriamanitra harena amin'ny alalan'ny natambatra ny hevitra izay efa nataony eo amin'ny sary, ary ny ambony sy ny ambany ny toerana. By hotetehina mandika ny hevitry ny karatra, dia afaka mialoha momba ny fanahy vadiny.
ny fanandroana-tsipiriany kokoa noho ny tonon'andro, no Andriamanitra, anisan'izany ny fifandraisana ny planeta isan-karazany. Ny anaran'ny amin'ny atonton-kintan'i ho famantarana, planeta sy ny famantarana ny fifandraisana, hilaza ny olona ihany koa ny toetra sy ny harena ny toeran'ny fifandraisana misy eo amin'ny planeta. Fa izany ihany koa azo atao ny milaza ny toerana bebe kokoa amin'ny fametrahana ny kintana, ho afaka ianao vao hahalala izay fanahy vady ary rehefa nahita na aiza na aiza.
- palm mamaky
Mino aho fa tsy ny olona maro ao amin'ny tany izay efa nahita ny fampakaram-bady ho an'ny andalana ao amin'ny rofia. Fanambadiana andalana, fa hatramin'ny ambany-pelatanan'ny ny kely rantsan-tanan 'ny tsipika dia eo amin'ny tsipika-pihetseham-po, toerana sy ny hatevin'ny tsipika, ela be, sns, dia afaka fankatovana izay fotoana izay karazana fanambadiana manodidina. Ankoatra izany, ny olona izay endriky ny rofia famakiana sy tanana dia toy izany koa no nilaza ihany koa fa misy ny ambony mety ho fanahy vady.
telepathy dia natao hamaky ny olona sy ny fomba fisainany ny ho avy amin'ny alalan'ny fampiasana ny heviny fahenina any an-dafin'ny dimy saina ny olona. Ny fahaizana, satria afaka mahatsapa ihany koa ny onjam-fanahy vadinao ianao mitady olona tsy mahazo harena, dia afaka mahazo ny harena marina-fil?zany vokatra. Ankoatra izany, ianao dia afaka jereo koa ny fahatsapana na ny olona no manontany tena ny fomba hamely ny tenako. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny
? fahitana ara-panahy
fitaomam-panahy, dia ny fahitana ara-panahy ny toe-javatra izay mihoatra fotoana sy ny habaka dia azo visualized toy ny lahatsary. Ary tsy izany ihany fa ny tontolon'ny fanahy, toy ny amin'izao fotoana izao ny olona sy ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao, ianao dia afaka mahita ny lasa sy ny hoavy. Vokatr'izany, manome harena sy amin'izao fotoana izao, na raha efa nihaona ny fanahy vadiny, ka mety fa ny fihaonana amin'ny ho avy. Azoko lazaina amin'ny ankapobeny, rehefa iharan'ny
harena-fil?zany izay ilaina, rehefa mandray ny
-fil?zany harena isan-karazany, toy ny vokatry ny harena-fil?zany ny mpampianatra mba hanatanteraka ny harena-fil?zany dia ny hoe samy hafa. Ao amin'ny maro ny harena-Teller koa ny harena-fil?zany ny toy izany, dia mety amin'ny tranga tsirairay dia tsy mitovy ny vokatra.
Ankoatra izany, ianao mba tsy tsara noho mivoaka, fa tsy mila ho lavo. Miala foana ihany ny boky, dia ny fomba fanolorana ny fampiasana ny harena-fil?zany haka ho any amin'ny vokatra tsara.
Afaka milaza mialoha. Ankoatra izany, ny olona izay endriky ny rofia famakiana sy tanana dia toy izany koa no nilaza ihany koa fa misy ny ambony mety ho fanahy vady.
Ianao. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny